မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ဗာဂျီးနီးယားတွင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
အကယ်၍ သင့်တွင်နောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်ရှင်းလင်းချက်လိုအပ်သည်ဆိုပါကသင်ရက်ချိန်းယူရန်လာသောအခါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာပညာပေးသူသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတစ် ဦး ဦး ကိုမေးမြန်းပါ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ဤနေရာတွင်တင်ပြသောအချက်အလက်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ဤအချက်အလက်သည်တိကျသည်ဟုယူဆသော်လည်းအာမခံချက်မရှိပါ။ ဒါဟာအနက်, အမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်ဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်ဘယ်လောက်အထိကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသလဲသေချာမသိပါ။ ငါတို့သုံးပါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွက်ချက်မှု
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသည်အလွန်လုံခြုံသည်။ ပထမသုံးလပတ်တွင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသည်ကလေးမွေးခြင်းထက်အဆများစွာပိုလုံခြုံကြောင်းပြသသည့်လေ့လာမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်တဖန်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသည်ကလေးရှိခြင်းထက်အန္တရာယ်နည်းပါးသည်။ https://rewirenewsgroup.com/article/2008/01/11/four-abortion-myths-dispelled/
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံများနှင့်နာကျင်မှုတုံ့ပြန်မှုရှိသည်။ ဆရာ ၀ န်များအနေဖြင့်နာကျင်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ကွဲပြားသောနည်းလမ်းများအသုံးပြုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စင်တာတွင် Aspiration D & C နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ကြွက်တက်ခြင်းမိနစ်အနည်းငယ်သာရှိနိုင်သည်။ နာကျင်မှုကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်းနာကျင်မှုကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်အရေးမပါသင့်ပါ။ သင့်ကိုနာကျင်မှုဝေဒနာကိုသက်သာစေရန်ဆေးဝါးပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးပညာပေးများသည်သင့်အတွက်မည်သည့်ရွေးချယ်မှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်သင့်အားကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ သင်၏သက်သာမှုကိုသက်သာစေရန်ဆေးဝါးများနှင့်အိပ်နေစဉ်၊ အိပ်ပျော်စဉ်၊
ဆေး / ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆိုတာဘာလဲ။ အဲဒါကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးလား?
ဟုတ်တယ်။ ဤဝေါဟာရများအားလုံးသည်ကိုယ်ခန္ဓာအသက် ၉ နှစ်အထိကိုယ်ဝန်ဖျက်ချသည့်တူညီသောလုံခြုံစိတ်ချရသောကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနည်းလမ်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ငါတို့ကြည့်ပါ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစာမျက်နှာ.
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကိုလည်းမျှော်လင့်ချက်အားဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဟုခေါ်သည် လေဟာနယ် aspiration။ ထိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုယ်နှိုက်သည်များသောအားဖြင့်ငါးမိနစ်မှဆယ်မိနစ်ခန့်သာကြာလေ့ရှိပြီးရုံးတွင်းမီးယပ်အထူးကုဌာနဖြစ်သည်။ သင်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစာမျက်နှာ။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုကိုကိုယ်ဝန်အသက် ၁၅ ပတ်မှ ၆ ရက်အထိကမ်းလှမ်းသည်။
An နီးသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရက်သတ္တပတ်တိုင်းတာမှုကိုသင့်နောက်ဆုံးရာသီလာသည့်နေ့မှတွက်ချက်နိုင်သည်။ ငါတို့က ကိုယ်ဝန်တွက်စက် သင်၏ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုကိုနောက်ဆုံးကာလ၏ရက်ကိုရိုက်ထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကျေးဇူးပြု သတိရ ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး မှစစ်ဆေးခြင်း၊ ကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် ultrasound တစ်ခုသာလျှင်ကိုယ်ဝန်နှင့်ခန့်မှန်းခြေကိုယ် ၀ န်ကိုအတည်ပြုနိုင်သည်။ လွဲချော်သောကာလသည်သင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်ဟုမဆိုလိုပါ မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်
Falls Church Healthcare Centre သည်လူတိုင်း၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးကိုအလေးအနက်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများနှင့် ၀ န်ထမ်းများအတွက် COVID-19 ထိတွေ့မှုကိုအနည်းဆုံးလျှော့ချရန်နည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်မစာစောင်ကိုဤနေရာတွင်ဖတ်နိုင်သည်။ FCHC နှင့် COVID-19 ။
သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများ၏ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရုံး၌လူနာများအားကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးခန်းနှင့် lob ည့်ခန်းများတွင်သာကြိုဆိုသည်။ အဆောက်အ ဦး တွင်ကာလတို“ စောင့်ဆိုင်းရသောနေရာ” ရှိသော်လည်းမိတ်ဖက်များနှင့်လူများအားထောက်ပံ့ရန်အတွက်ဗဟို၏အပြင်ဘက်တွင်ရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ပေါက်မှာငါတို့ check-in areaရိယာမှာ သင်၏အပူချိန်ကိုယူပြီးသင်သည်ရောဂါလက္ခဏာများမခံစားရကြောင်းအတည်ပြုသည့် COVID စစ်တမ်းပုံစံကိုသင်ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများနှင့် ၀ န်ထမ်းများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆက်အသွယ်ခြေရာကောက်ခြင်း၌ပါ ၀ င်နေသည်ဟုဝန်ခံရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများနှင့် ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်သင့်သည် မျက်နှာဖုံးများဝတ်ဆင်ပါ စနစ်တကျ အလယ်ဗဟိုအတွင်းပိုင်းအားလုံးအချိန်များတွင်။ လိုအပ်ပါကသင့်အတွက်တစ်ခုပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများနှင့် ၀ န်ထမ်းများသည်စင်တာသို့မဝင်မီသူတို့၏လက်များကိုဆေးကြောသန့်စင်သင့်သည်။
လူနာများအားအလည်အပတ်ခရီးတစ်လျှောက်လုံးအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက် clipboard နှင့်ဘောပင်ကိုပေးသည်။ လူတိုင်းသည်မိမိတို့ထိုင်ခုံကိုသုံးရန်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ lob ည့်ခန်း၌သင်၏ထိုင်ခုံအတွက်“ အလုပ်များ” နိူင်သည်။
သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်စွက်ပြီးပို့ပေးပါ အွန်လိုင်း။ သင့်ချိန်းဆိုချိန်၌၎င်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။
ငါသီးခြား Ultrasound ချိန်းဆိုရန်လိုအပ်ပါသလား?
နံပါတျ ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၁ ရက်မှစ၍ ဗာဂျီးနီးယား၏မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေ (RHPA) ကိုပြဌာန်းခဲ့ပြီးမဖြစ်မနေလိုအပ်သော ultrasound နှင့်စောင့်ဆိုင်းနေရသောကာလအတွက်ပြည်နယ်လိုအပ်ချက်ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ဒါ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့သတင်း - ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောကြောင့်လူနာနှင့်ဆရာ ၀ န်များအကြား ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်သည်။
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချိန်းဆိုချက်မတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့၏ Telehealth အစည်းအဝေး၏အားသာချက်ကိုယူရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ Telehealth session သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာပညာပေးသူအားသင်၏လူနာပုံစံများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်နှင့်သင်၌ရှိကောင်းရှိနိုင်သောမေးခွန်းများကိုဖြေကြားရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချိန်းဆိုမှုအတွက်စင်တာ၌သင်လိုအပ်သောအချိန်ပမာဏလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ သင်၏ Telehealth ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုသင်ပြီးပါကရုံးသို့ရောက်ရန်ပြင်ဆင်ပါ 1 1 /2နာရီ ဓာတ်ခွဲခန်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုများပြီးမြောက်ရန်။ အကယ်၍ သင်သည် Telehealth အစည်းအဝေးကိုမပြီးဆုံးနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေရန်ပြင်ဆင်ပါ နာရီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူနာပုံစံများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ: သင်၏ Telehealth ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုသင်ပြီးပါကရုံးသို့ရောက်ရန်ပြင်ဆင်ပါ21 /2နာရီ ဓာတ်ခွဲခန်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့်သင်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုဖြည့်စွက်ရန်။ အကယ်၍ သင်သည် Telehealth အစည်းအဝေးကိုမပြီးဆုံးနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေရန်ပြင်ဆင်ပါ3နာရီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူနာပုံစံများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သင်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ရန်။ အကယ်၍ သင်၏နောက်ဆုံးကာလသည်လွန်ခဲ့သော ၁၂ ပတ်ကဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ ဗဟိုတွင်တက်ရန်စီစဉ်ပါ4နာရီ။
လူတစ် ဦး စီ၏သွေးသည်အဓိကအမျိုးအစားလေးမျိုးအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ A, B, AB, O. O. သွေးအမျိုးအစားများကိုသွေးဆဲလ်များမှအေတီဂျင်အမျိုးအစားများမှဆုံးဖြတ်သည်။ Antigen များသည်သွေးဆဲလ်များ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိပရိုတင်းများဖြစ်ပြီးကိုယ်ခံအားစနစ်မှတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ Rh အချက်သည်သွေးနီဥများမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိပရိုတင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Rh factor ရှိသူအများစုသည် Rh-positive ဖြစ်သည်။ Rh factor မရှိသောသူများသည် Rh-negative ဖြစ်သည်။
Rh factor စစ်ဆေးမှုသည်သင့်သွေးစစ်ဆေးမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်သွေးတွင် Rh antigen မရှိလျှင်၎င်းကို Rh-negative ဟုခေါ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတွင် antigen ရှိလျှင်၎င်းသည် Rh-positive ဟုခေါ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Rh-negative ဖြစ်လျှင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးနောက် Rh immunoglobulin ဟုခေါ်သောဆေးကိုသင်ရလိမ့်မည်။ Rh immunoglobulin သည် Rh-negative မိခင်ကိုမထိခိုက်စေနိုင်သည့်သွေးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 15% လူများ၏ Rh-Negative ဖြစ်ကြသည်။
Rh အချက်သည်လူတစ် ဦး ၏ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်ပါ။ သို့သော်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကလေး၏သွေးတွင် Rh အချက်နှင့်မိခင်၏သွေးမဖြစ်သည့်တိုင်ပြmostနာများဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်များသောအားဖြင့် immunoglobulin (RhIg) ဆေးဖြင့်တားဆီးနိုင်သည်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်မူတည်။ သင်၏ချိန်းဆိုချက်သည်ဆေး ("ဆေးလုံး") သို့မဟုတ် "နိုးသော" လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်ဖြစ်ပါကသင်ချိန်းဆိုချက်မတိုင်မီပေါ့ပါးသောအစာကိုစားနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ခန့်အပ်မှုသည်အိပ်ပျော်နေစဉ် (IV) သက်သာစေသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအတွက်ဖြစ်ပါက၊ သင့်ချိန်းဆိုချက်မတိုင်မီ ၆ နာရီမတိုင်မီတွင်အစာစားခြင်း၊ မသောက်ခြင်း၊ သွားဖုံးဝါးခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်မသောက်ပါနှင့်။ သင်လိုအပ်သောဆေးဝါးများကိုရေတစ်ခွက်နှင့်သောက်နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ တကယ်တော့သင့်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူခန်းထဲမှာ crackers၊ cookies တွေ၊ ဖျော်ရည်တွေ၊ လက်ဖက်ရည်ဒါမှမဟုတ်ဆိုဒါတွေကမ်းလှမ်းပါလိမ့်မယ်။ ဆေးကုသမှုခံယူပြီးနောက်သို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းပြီးနောက်သင်၏ပုံမှန်စားရန်အချိန်ဇယားကိုပြန်လည်စတင်နိုင်သည်။ သင်ပိုမိုပေါ့ပါး၊ အဆီနည်းနည်းနှင့်ကန ဦး အစားအစာများကိုအစာကြေရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်ဟုသင်အကြံပြုပါသည်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ (ဆေးလုံး) ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသို့မဟုတ်နိုးထမှု (ဒေသတွင်းထုံဆေးရှိခြင်း) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအတွက်သင်ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်နိုင်သည် (သို့သော်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ကိုမောင်းနှင်နိုင်သည်) ။ သင့်ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်အိပ်ဆေး / မေ့ဆေး (အိပ်ပျော်တော့မယ်) ရှိရင် မင်းအိမ်ကိုမမောင်းနိုင်ဘူး ကျေးဇူးပြု၍ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်ကိုအိမ်သို့မောင်း။ မသွားနိုင်ပါက (ဖြစ်နိုင်လျှင်သင့်ကိုအိမ်ထဲဝင်ရန်နှင့်အခြေချရန်ကူညီပေးမည့်သူတစ် ဦး ဦး ကိုပေးပါ) ။ အနည်းဆုံး ၆ နာရီထပ်မံမောင်းနှင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးပညာပေးများသည်သင်နှင့်ထပ်မံဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သော်လည်းသင်၏လိင်အင်္ဂါအတွင်းထည့်သွင်းခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ကူးစက်မှု၏အန္တရာယ်ကို minimize လုပ်ဖို့။
ဟုတ်တယ်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံသည်အရင်ကဲ့သို့ဆက်လက်တည်ရှိမည်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးမကြာမီကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် ပို၍ လွယ်ကူကြောင်းတွေ့ရသည့်အတွက်များစွာသောသူတို့သည်အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်။ D&C လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်မီးဖွားခြင်းတွင်အများအားဖြင့်မျိုးပွားမှုကုသမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့စင်တာ၏ကျန်းမာရေးပညာရေး၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကလေးမွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ရွေးချယ်လိုက်သောရွေးချယ်မှုကိုချက်ချင်းစတင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
လူတိုင်း၏ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုမှာကွဲပြားပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုများအရအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ မဟုတ် သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်နောင်တရပေမယ့်အစား ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ Conversation စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်။ ပြည့်စုံသောအပိုင်းရှိပါတယ် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးနောက်ကျန်းမာစွာရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း သောငါတို့သည်သင်တို့ကိုဖတ်ရှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်းသင်တို့ကြည့်ရှုရန်အကြံပြုအပ်ပါသည် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခင်နှင့်ပြီးနောက် အများအပြားအကြံပေးခြင်းဗီဒီယိုများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုပါဝင်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ပြောဆိုရန်အထောက်အကူပြုမည်ဟုသင်ခံစားရပါကကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးနောက်အကြံပေးခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသူနှင့်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားမည်သူဆုံးဖြတ်မည်နည်း ဟူ၍ အောက်ပါရင်းမြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုနိုင်သည်။
မာရီယာ Ines ဘတ္, MSW, LCSW
https://thrivetherapycenter.com/therapists 10560 ပင်မလမ်း Suite # PH4 Fairfax, VA သို့ 22030 703-507-0963 | Se habla español
Danille အက်စ် Drake, PhD
https://www.danilledrakephd.com/ 131 ဂရိတ်ရေတံခွန်လမ်း, Suite 101 ရေတံခွန်ဘုရားကျောင်း, VA သို့, 22046 703-532-0221
Bonnie R ကို Sobel, RN, LCSW, BCD
http://www.bonniersobel.com/ 7643 Leesburg ပိုက်ရေတံခွန်ဘုရားကျောင်း, VA သို့, 22043 703-969-7871
Telehealth သည်လူနာပညာပေးများထဲမှဗီဒီယိုတစ်ခုသို့မဟုတ်အသံဖိုင်များဖြင့်လုံခြုံသော၊ Telehealth သည်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုပိုမိုတတ်နိုင်ပြီးအချိန်သက်သာစေသည်။
Telehealth ၏အကျိုးကျေးဇူးအချို့မှာ -
သင့်အတွက်အဆင်ပြေသည့်အချိန်နှင့်နေရာတွင်စောင့်ရှောက်မှုရယူပါ။ Telehealth သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စင်တာတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရောက်ရှိနေမည့်အစားကျွန်ုပ်တို့၏လူနာပညာပေးတစ် ဦး နှင့်အဝေးမှဆက်သွယ်နိုင်သည်။ Telehealth ကိုသင့်အိမ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်နေရာမှသော်လည်းကောင်းအခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Telehealth အစီအစဉ်တွင်ညနေခင်းနာရီများပါဝင်သည်။
ပိုမိုသက်သောင့်သက်သာရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်စောင့်ရှောက်မှုရယူခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာပညာပေးသူနှင့်စကားပြောသောအခါသင်မည်သည့်နေရာတွင်ရောက်မည်ကိုသင်ရွေးချယ်ရမည်။ သင်၏အိမ်တွင်ဖြစ်စေ၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏အိမ်တွင်ဖြစ်စေ၊ သင်နှင့်အတူရှိသူသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်အထောက်အကူပြုသူနှင့်အတူဖြစ်စေ၊ သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ (ဒါ့အပြင်သင်ဟာသင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာရှိရင်မျက်နှာဖုံးတပ်စရာမလိုဘူး!)
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချိန်းဆိုမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံး၌အချိန်နည်းပါးခြင်း။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် Telehealth ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စင်တာတွင်သင်ရောက်ရှိလာမည့်အချိန်ပမာဏအားလျော့ကျစေသည် 90 မိနစ်။
အွန်လိုင်းမှအကြွေးဝယ်ကဒ်ဖြင့်ငွေပေးချေခြင်း (အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀) သို့မဟုတ်အပြည့်အဝငွေပေးချေခြင်း။ ကျန်ရှိသောလက်ကျန်ငွေကိုသင်၏လူကိုယ်တိုင်ချိန်းဆိုချိန်တွင်ပေးချေနိုင်သည်။ (အကယ်၍ သင်သည်အာမခံကိုအသုံးပြုနေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏မူဝါဒကိုစစ်ဆေးနိုင်ပြီးသင်၏လွှမ်းခြုံမှုနှင့်ကုန်ကျငွေကိုသင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။ )
ကျွန်ုပ်၏လူနာပညာပေးသူနှင့်ကျွန်ုပ်သည် Telehealth တွင်အဘယ်အရာကိုဆွေးနွေးကြမည်နည်း။
သင်၏လူနာပညာပေးသူနှင့်သင်၏ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းပုံစံများအပါအ ၀ င်သင်၏လူနာသတင်းအချက်အလက်ပုံစံများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်မည်၊ သူတို့မှာသင်၌ရှိကောင်းရှိနိုင်သောမည်သည့်မေးခွန်းများကိုမဆိုဖြေဆိုရန်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်လည်းထိုနေရာတွင်ရှိသည်။
Telehealth သည်သင်၏ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစောင့်ရှောက်မှုချိန်းဆိုမှုတွင်ပါဝင်သောအပိုပါဝင်ပြီးအပိုထပ်ဆောင်းပေးစရာမလိုပါ။ သင်၏ Telehealth ကျန်းမာရေးချိန်းဆိုမှုတွင် သင်၏ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစောင့်ရှောက်ရေးချိန်းဆိုမှု၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့အားဒေါ်လာ ၁၀၀ ပေးချေရန်ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည်။ သင်၏ Telehealth ကျန်းမာရေးအတွက်ချိန်းဆိုမှုအတွက် doxy.me ကိုသင် ၀ င်သောအခါသင်၏လူနာပညာပေးသည်သင်၏အကြွေး / ဒက်ဘစ်ကဒ်အချက်အလက်ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ ပေးလိမ့်မည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးလူသိများသောငွေပေးချေမှုစနစ်လုပ်ဆောင်သူ Stripe မှငွေပေးချေမှုကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်အချက်အလက်ကို Falls Church Healthcare Centre နှင့် doxy.me တို့မှကိုင်တွယ်ခြင်းမရှိပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ပုဂ္ဂလိကအာမခံဖြင့်ငွေပေးချေလျှင်သင်၏ Telehealth ချိန်းဆိုသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းရန်တောင်းခံသည့် copay သို့မဟုတ်ပူးတွဲအာမခံရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏ Telehealth ချိန်းဆိုမှုအတွက်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်နည်း။
ပထမဦးစွာ ရက်ချိန်းယူရန်တောင်းဆိုပါ အွန်လိုင်း။ လူနာပညာပေးသူသည်သင် Telehealth ကျန်းမာရေးချိန်းဆိုမှုကိုသင်လိုချင်သည့်အချိန်တွင်စီစဉ်ရန်သင့်အားအီးမေးလ်ပို့ပါလိမ့်မည်။ သင်သည်အီးမေးလ်တစ်စောင်နှင့်စာသားအတည်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ချက်ချင်းဆိုသလိုသင့်ချိန်းဆိုမှုကိုတောင်းခံပြီးသည်နှင့် ကျေးဇူးပြု ဖြည့်ပါ လူနာသတင်းအချက်အလက်အွန်လိုင်း. ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာပညာပေးများကိုသင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းအားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးပုံမှန်ဖြစ်ရန်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုဖတ်ပါ အကွောငျး ဆေးဖျက်ချ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ။ သင်၌ရှိကောင်းရှိနိုင်သောမည်သည့်မေးခွန်းများကိုမဆိုလွတ်လပ်စွာစဉ်းစားပါ။
နေရာတစ်ခုရွေးပါ ဘယ်မှာသင်သက်သောင့်သက်သာခံစားရပြီးလွတ်လပ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်သည်။ သင်တစ် ဦး ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးသူတစ် ဦး သင်နှင့်အတူရှိလိုပါကအဆင်ပြေပါသည်။
သင့်ချိန်းဆိုမှုမတိုင်မီငါးမိနစ်ခန့်မှာ၊ ပေးထားသော link ကိုသုံးပြီး Telehealth session ကိုသို့ log ။ သင်၏လူနာအချက်အလက်ပုံစံပေါ်တွင်ပြသထားသည့်အတိုင်းသင်၏နာမည်ကိုသေချာအောင်ရိုက်ပါ။
ခရက်ဒစ် / ဒက်ဘစ်ကဒ်အသင့်ရှိပါ ဒါကြောင့်သင်ကကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစောင့်ရှောက်မှုရက်ချိန်းအတွက်သက်ဆိုင်သောဒေါ်လာ ၁၀၀ ပေးချေနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်။ Falls Church Healthcare Centre သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုအလေးအနက်ထားသည်။ ၎င်းသည် doxy.me ကို Telehealth platform အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် - ၄ င်းတို့သည် HIPAA နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား privacy နှင့်လုံခြုံရေးစံနှုန်းများကိုလိုက်နာခြင်းကြောင့်လူသိများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်၏ Telehealth အစီအစဉ်သည် အဆုံးမှစာဝှက်ထားတယ် ဆိုလိုသည်မှာအလယ်၌မည်သည့်ဗွီဒီယိုနှင့်အကြောင်းအရာကိုမဆိုနားထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းခြင်းအလယ်၌ဆာဗာမရှိကြောင်းဆိုလိုသည်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် doxy.me တွင်စာမျက်နှာရှိသည် သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးနှင့် privacy အကောင်အထည်ဖော်မှုအကြောင်းအသေးစိတ်.
ကျွန်ုပ်၏ Android ဖုန်း / iPhone ဖြင့် Telehealth ကိုကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့! ကျွန်ုပ်တို့ Telehealth အတွက်အသုံးပြုသောအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းသည် doxy.me (ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်မှအသုံးပြုသည်) ၎င်းကိုစမတ်ဖုန်း၊ ဝင်းဒိုး၊ Mac နှင့် Chromebook ကွန်ပျူတာများနှင့်အချို့သောတက်ဘလက်များတွင်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်သုံးနိုင်သည်။ အသေးစိတ်နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအတွက်အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ Telehealth အတွက်အသုံးပြုသောအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းသည် doxy.me (ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်မှအသုံးပြုသည်)၊ ၎င်းသည်စနစ်လိုအပ်ချက်အနည်းဆုံးရှိသောအမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Windows / Mac / Chromebook: သင့်အနေဖြင့်အသံ (မိုက်ခရိုဖုန်း၊ စပီကာသို့မဟုတ်နားကြပ်)၊ ဗီဒီယို (ဝက်ဘ်ကင်မရာ)၊ အောက်ပါဘရောင်ဇာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောဂူဂဲလ်ခရုမ်း၊ Mozilla Firefox၊ Microsoft Edge သို့မဟုတ် Safari 11+ (နောက်ဆုံးဗားရှင်း) နှင့်ခိုင်မာသောအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်ကွန်ပျူတာတစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။ (အသေးစိတ်မှာအသေးစိတ်ရှိပါတယ် doxy.me ၏စနစ်လိုအပ်ချက်များစာမျက်နှာ.)
iOS နှင့် Android ဖုန်း: iOS ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းတွင် Safari 11+; Android မှာ Google Chrome ။ WiFi (သို့) ဒေတာအစီအစဉ်တစ်ခုခုလိုအပ်လိမ့်မယ်။
doxy.me သည် Amazon Kindle သို့မဟုတ်အခြား e-reader များနှင့်ယခုအချိန်တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ရရှိနိုင်သောကိရိယာများရှိသည် သင်၏ကွန်ရက်ဆက်သွယ်မှုကိုစစ်ဆေးပါ doxy.me ကိုအောင်မြင်စွာကိုင်တွယ်လိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုရန်
ကျွန်ုပ်၏ Telehealth ချိန်းဆိုမှုကိုဖုန်းဖြင့်အစားထိုး။ ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများနှင့်ပညာရှင်များကိုစကားပြောဆိုနေစဉ်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မြင်တွေ့နိုင်ရန်နှင့်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဝေမျှနိုင်ရန်အတွက် Telehealth အစည်းအဝေးများအတွက် doxy.me ကိုအသုံးပြုသည်။
သင့်မှာသင့်တော်တဲ့ကွန်ပျူတာ (သို့) စမတ်ဖုန်းမရှိရင်၊ ဒါမှမဟုတ်သင့်တယ်လီဖုန်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်လိုလျှင်၊ ရက်ချိန်းယူရန်တောင်းဆိုပါ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကို ၇၀၃-၅၃၂-၂၅၀၀ သို့ခေါ်ဆိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အဖြေများအတွက်သင်နှင့်အတူလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒါperfectlyုံပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာအချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စင်တာတွင်ပိုမိုတွေ့ဆုံရန်ရှိသည်။ ဘယ်တော့လဲ ရက်ချိန်းယူရန်တောင်းဆိုပါရွေးချယ်ရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ -“ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လူနာချိန်းဆိုမှုတွင်ကျွန်ုပ်၏လူနာပညာသင်ကြားမှုကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ” သင်၏လူနာချိန်းဆိုမှုကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးသင်၏လူနာပညာသင်ကြားမှုတွင်ပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ချိန်းဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ ၃ မိနစ်ပိုကြာသည် လူနာပညာရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စင်တာတွင်ဖြစ်ပျက်လာသောအခါ။
အသက် ၁၈ လမှလူနာများအတွက်အချက်အလက်များ \_ t
မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်မှု / သဘောတူစာချုပ်
သငျသညျသူတို့ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသူတို့ကသာအလုပ်လုပ်! အမေရိကန်သားဖွားမီးယပ်အထူးကုများကွန်ဂရက် (ACOG) သည်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့သည် အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ ဒါကမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်မှုပုံစံတိုင်းကိုဖြတ်သန်းသွားတယ်။
သင်တို့သည်လည်းသွားနိုင်သည် bedider.org မည်သည့်မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်းသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်။ သန္ဓေတားဆေးသည်အရွယ်အစားတစ်ခုနှင့်မကိုက်ညီပါ၊ ထို့ကြောင့်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်သောမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်းကိုရှာဖွေရန်သင့်လိုအပ်ချက်ကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။
အရေးပေါ်သန္ဓေတားခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ကိုယ်ဝန်ကိုတားဆီးပေးသောဆေးမထိုးဘဲမွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်။ အရေးပေါ်သန္ဓေတားနည်းကိုသင်၏ကလေးမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်မှုမအောင်မြင်ဟုသင်ထင်မြင်လျှင်၊ သန္ဓေတားဆေးကိုမသုံးခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရလျှင်အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးကိုချက်ချင်းသုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံပြီး ၃ ရက်အကြာအထိအသုံးပြုနိုင်သည်။ အရေးပေါ်သန္ဓေတားခြင်းသည်သင်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေနည်းပါးစေသည်။ ၎င်းသည်ကြိုတင်မွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းကဲ့သို့ထိရောက်မှုမရှိသောကြောင့်သင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွမှုသို့မဟုတ်ဖြစ်လိုလျှင်၊ ကိုယ်ဝန်ကိုကာကွယ်ရန်သင်၏တစ်ခုတည်းသောကာကွယ်မှုအဖြစ်အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးကိုအားမကိုးပါနှင့်။ အရေးပေါ်သန္ဓေတားခြင်းသည်လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများမှအကာအကွယ်မပေးပါ။
ငါဘာကြောင့်နှစ်စဉ် GYN ("Well Woman") စာမေးပွဲကိုဖြေသင့်သလဲ။
ကျနော်တို့ RN Sharla Taylor's ကိုနှစ်သက်တဲ့အိုင်အိုဝါတက္ကသိုလ်သားဖွားမီးယပ်ဗေဒဌာန၊
“ ငါတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာရွေးချယ်စရာများစွာရှိတယ်။ ဤရွေးချယ်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ အလုပ်ရှင်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောရွေးချယ်မှုများသည်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရမည့်ရွေးချယ်မှုများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ အစားအစာ၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ကျန်းမာရေးအလေ့အထနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲများကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရွေးချယ်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးပိုင်ဆိုင်ရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာခဏကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအလေ့အကျင့်များပြုလုပ်ကြသည်။ ကျန်းမာရေးကောင်းရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာနှစ်စဉ်မီးယပ်ရောဂါစစ်ဆေးခြင်းနှင့်သင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းပေါ် မူတည်၍ ဖြစ်သည်။ Pap Smear, ရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်မှုသည်အချိန်သို့မဟုတ်အဆင်မပြေမှုများမပါ ၀ င်ပါ။ Pap Smear သည်သားအိမ်ခေါင်း (သားအိမ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း) သို့မဟုတ်လိင်အင်္ဂါ (မွေးဖွားသည့်တူးမြောင်း) ကိုစောစောစီးစီးသိရှိနိုင်ပြီးရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သင်၏နှစ်စဉ်စာမေးပွဲကိုစစ်ဆေးရန်နောက်ထပ်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်မှာသင်၏ကျန်းမာရေးပညာရှင်သည်ရင်သားကင်ဆာစစ်ဆေးမှု၊ သွေးပေါင်ချိန်စစ်ဆေးမှု၊ တင်ပါးဆုံတွင်းစစ်ဆေးမှုနှင့်သင်၏နှလုံးနှင့်အဆုတ်များကိုနားထောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကျန်းမာရေးသမိုင်းအပေါ် အခြေခံ၍ အခြားစစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ မင်းကျန်းမာတယ်ဆိုတာသိရတာကောင်းတယ်၊ အဲ့လိုဆက်လုပ်ဖို့သင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာပဲ” \_ t
Pap test ကိုရာသီလာရင်လုပ်ရင်အသုံးဝင်လား။
ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်၏ကာလသည်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်မည်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝမသိပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကိုရရှိပါကသွေးထွက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အားပြန်လည်သတ်မှတ်သင့်သလော။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရာသီလာတာနဲ့အမျှ Pap Smear စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကပိုပြီးတိကျတယ် မဟုတ် ဖြစ်ပျက်မှု၊ သင့်ချိန်းဆိုမှုကိုအချိန်ဇယားဆွဲရန် (သို့) အချိန်ဇယားဆွဲရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ (အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်မဖြစ်သောသားအိမ်မှသွေးထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သည့်ရာသီလာခြင်းများရှိပါကဤအရာသည်ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။ ) Pap Smear စစ်ဆေးမှုအတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်ရာသီလာခြင်းအဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပတ်အတွင်းဖြစ်သည်။ သင်ဖုန်းခေါ်ဆိုသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးပညာပေးတစ် ဦး နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
ပုံမှန်မဟုတ်သော pap ရလဒ်များအတွက်မည်သူသည်အန္တရာယ်ပိုများနိုင်သနည်း။
အကယ်၍ ပုံမှန်မဟုတ်သော Pap ရလဒ်များအတွက် -
သငျသညျအသက် 18 မတိုင်မီလိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီ
သင့်မိခင်က ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်မှ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များအထိကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းပြcertainနာများအတွက်သောက်ခဲ့သော DES (Di-Ethyl-Stilbestrol) ဆေးကိုသောက်ခဲ့သည်။
သင်သည်အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်မီကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်
ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်မည်ကဲ့သို့ပေးချေရမည်နည်း။
Master Express၊ Visa၊ American Express၊ ငွေရှင်းကောင်တာများတွင်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုများပေးသည့်အချိန်တွင်အခကြေးငွေအားလုံးကိုပေးရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာရေးအာမခံစီမံကိန်းအများစုကိုလက်ခံပြီးသင်၏အကျိုးခံစားခွင့်များကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ငါတို့စစ်ဆေးကြည့်ပါ လက်ခံအာမခံအာမခံ ပိုမိုသိရှိလိုပါကစာရင်းပြုစုပါ။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းအတွက်ပေးဆပ်ရန်အတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကူအညီများအတွက်သင်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်သည်။ သင်ချိန်းဆိုသည့်အခါနောက်ထပ်ရန်ပုံငွေအတွက်အရည်အချင်းစစ်ဆေးမှုအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အားပြောပြပါ။
Falls Church Healthcare Centre သည်အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းတွင်ဖော်ပြထားသောတိုက်ရိုက်အာမခံပေးသူများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။
AETNA (HMO, PPO, POS, EPO, HDHP, HSA) CareFirst အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ
AETNA လက်မှတ်ရေးထိုးသူများ ပထမ ဦး ဆုံးကျန်းမာရေးကွန်ယက် (အရေးပေါ် GYN သာ)
Anthem အပြာရောင်လက်ဝါးကပ်တိုင်အပြာရောင် Shield ကို (HMO, PPO, POS, HDHP) ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအကျိုးကျေးဇူးများ
Anthem ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူများ (HMO) တီထွင်ဆန်းသစ်မှုကျန်းမာရေး
Anthem ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူများ Plus (GYN တစ်ခုတည်းသာ) Meritain ကျန်းမာရေး (GYN တစ်ခုတည်းသာ)
CareFirst အပြာရောင်လက်ဝါးကပ်တိုင်အပြာရောင်ဒိုင်းလွှား (HMO, PPO, အပြာရောင်ရွေးချယ်မှုအားသာချက်၊ အပြာရောင်ရွေးချယ်မှု Plus) Multiplan (Beech လမ်း၊ PHCS) (GYN တစ်ခုတည်းသာ)
အကယ်၍ လူနာတွင်သူတို့၏အာမခံပေါ်လစီတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်မီးယပ်ရောဂါအကျိုးခံစားခွင့်များပါ ၀ င်သည်ကိုမသေချာလျှင် ၄ င်းတို့၏အာမခံကဒ်နောက်ဘက်ရှိသူတို့၏ပေါ်လစီဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနံပါတ်ကိုရှင်းပြရန်အတွက်အကြံပေးနိုင်သည်။
အာမခံအကျိုးကျေးဇူးများကိုငြင်းပယ်ခြင်း - အကျိုးခံစားခွင့်ကိုအတည်ပြုသည် မဟုတ် အာမခံသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှု၏အတည်ပြုချက်တစ်ခုအာမခံချက်။ အကျိုးခံစားခွင့်များသည်သတ်မှတ်ထားသောအရည်အချင်းပြည့်မှီမှု၊ အာမခံလေယာဉ်မှူးကတိုင်ကြားချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတာနဲ့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်။
အရေးကြီး: အဆိုပါအာမခံလေယာဉ်တင်သင်္ဘော ခွန်အား လူနာရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုဖုံးလွှမ်း။ သို့သော် ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များ do သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမစတင်မှီပံ့ပိုးသူအနေဖြင့်အပြည့်အဝပေးချေရန်လိုအပ်ကောင်းနှုတ်ယူနိုင်သည်။ ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်မှုရှိ / မရှိကိုအတည်ပြုရန်လူနာအား ၄ င်းတို့၏ပံ့ပိုးသူ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်သွယ်ပါရန် ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပေးပါ။
အမျိုးသားကိုယ်ဝန်ဖျက်ချအဖွဲ့ချုပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှကောက်နုတ်ချက်များ https://prochoice.org/naf-helps-samantha-bee-expose-crisis-pregnancy-centers/ )